The Imponderable Pandering to Pandas
Don’t believe just because he isadirector in President U Thein Sein’s office
Myanmar Muslim’s Kok Kaing Masjid ATTACKED in Yangon Myanmar
Confirmed that there were no Rohingya invasion
Yes Myanmar Military Government is destroying our freedom
Yes, I felt very lonely…I love my Myanmar Friends but …where are they now
Daw Suu if the Racists refuse to follow you, please dare to walk alone
US Embassy Rangoon’s Press Release
အောင်တင် “သမိုင်းမှန်ကို သင်ကြားပေးနိုင်မှ…”
Rohingyas in Malaysia protest violence
Posted: 16 Jun 2012 10:50 AM PDT
Where the conservation of species is concerned, the giant panda is surely the most powerful symbol in the world. Recent developments indicate that panda diplomacy is now in vogue.
In the third national census conducted by WWF in 2004, it is estimated that there are about 1600 left in the wild - an increase of more than 40 percent previously known to exist. The 2004 survey showed that there are 23,049km2 of panda habitat in China.
A national treasure in China, the panda is also the symbol of the World Wildlife Foundation since its formation in 1961.
Pandas live mainly bamboo forests high in the mountains of western China. Most of the wild population being distributed between the Qinling and Minshan Mountains.
Pandas eat the leaves, stems, and shoots of various bamboo species.
Since bamboo contains very little nutritional value, pandas must eat 12-38kg every day to meet their energy needs.
About 1% of their diet is made up of other plants and meat. Sometimes, the panda will hunt for pikas and other small rodents.
Pandas belong to the bear family and have the same digestive system ofacarnivore. However, due to environmental factors, they have adapted toavegetarian diet.
Hence, it is essential that they live close to areas where bamboo is abundant. A key threat to their survival is the loss of bamboo habitat.
Wikipedia refers to "Panda Diplomacy" as China's use of Giant Pandas as diplomatic gifts to other countries. The practice existed as far back as the Tang Dynasty, when Empress Wu Zetian (625–705) sentapair of pandas to the Japanese emperor. From 1958 to 1982, China gave 23 pandas to nine different countries.
Pandas have become important diplomatic symbols, not only to China. Inavisit by Hu Jintao to Japan in May 2008, China announced the loan of two Pandas to Japan. The President was quoted as saying "Giant pandas are very popular among the Japanese, and they areasymbol of the friendly ties between Japan and China." CLICK HERE for more.
The Star reported that Malaysians will soon be able to see the iconic but endangered Giant Panda in real life. China will loan two baby pandas to the country for 10 years.
This follows an agreement between the Government and China Wildlife Conservation Association, in commemoration of the countries' 40th anniversary of diplomatic relationship, the Natural Resources and Environment Ministry said inastatement yesterday.
According toaBernama statement:
The pair of panda bears, on loan to Malaysia by China, will be placed at the Wetland Park in Putrajaya because of its location which is in the country's administrative centre, Minister in the Prime Minister's Department Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz said today.
He said the choice of the Wetland Park was made also because it was easy for the people to go.
"We appreciate the panda bears because they symbolise the close relationship between Malaysia and China.
"The people should have access to the bears and we choose the Wetland Park because the place is easy for the people to go," he told reporters after the 1 Malaysia community gotong-royong with participants of the National Service Training Programme at Kampung Sauk here.
Can you imagine the cost of maintaining those pandas? And at whose expense? Is it justified?
Well, we need not go to Putrajaya or China to see pandas! Atlanta Zoo runsalive cam for its Pandas. The site said that thanks toagenerous gift from EarthCam, fans all over the world can continue to enjoy watching Zoo Atlanta's giant pandas.
The live stream will be broadcast Monday – Friday; 10 a.m. –5p.m. (EST) AT THIS LINK.
CLICK THIS LINK to enjoy lovable and cute photos of pandas FREE OF CHARGE :-).
Those endearing pictures of pandas will certainly provide comic relief for our reaction to the imponderable pandering of pandas!
Posted: 16 Jun 2012 05:40 AM PDT
Posted: 16 Jun 2012 05:33 AM PDT
Posted: 16 Jun 2012 05:24 AM PDT
Burmese police taking sides, abusing powers: UN Updated 15 June 2012, 12:01 AEST Girish Sawlani
The United Nation's Special Rapporteur for Human Rights in Burma, Tomas Quintana says he has received information that police forces are not following orders, in the conflict zone in Arakan state.
Sectarian unrest displaces Burma's Rohingyas
An ethnic Arakan man holds homemade weapons as he stands in front ofaburning house.[Reuters]
Human rights groups say the Burmese authorities are doing little to quell the sectarian violence that's gripped the country's West.
At least 29 people have been killed and more than 30,000 displaced by clashes between Buddhists and ethnic Rohingya Muslims.
The clashes began whenaBuddhist woman was allegedly raped and killed by three Muslim men.
Mr Quintana told Radio Australia members of the police force may be abusing their powers.
"What I have received is that the police may be taking some sides in this conflict," he said.
"That's not the way that the police has to be acting to solve and to restore order.
"Another thing that concerns me in Myanmar is that the state of emergency established and ordered by the president is not maintained permanently."
Mr Quintana has called members of the Burmese parliament to findaresolution to the sectarian violence in Arakan state also known as Rakhine state.
He says the issue of ethnic and religious violence in Western Burma isanational one.
"The problem of the Rohingya is notaproblem in Rakhine state," he said.
"It'sanational problem that involves all people of Myanmar."
Earlier Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi saidaceasefire agreement to end the sectarian violence was not enough.
Speaking from Geneva, Ms Suu Kyi saidapolitical settlement is needed to achieve lasting and meaningful peace.
Posted: 16 Jun 2012 05:08 AM PDT
Posted: 16 Jun 2012 08:47 AM PDT
"UMNO tidak patut menyangka bahawa duit boleh membeli segalanya. Ada ramai pemimpin BN yang menunggu untuk menyertai kami, namun masa akan menentukan segalanya. Mereka tidak akan melakukannya sehingga mereka boleh menentukannya dengan konstituensi mereka," MP Batu dari PKR, Tian Chua memberitahu Malaysia Chronicle.
'Zaman selesa' BN sudah tamat: Sila berhenti bermimpi sekarang Najib!
"Adakah perdana menteri akan adakan pilihanraya pada masa itu? Dia juga seorang Islam," kata Abdullah pada pemberita pada hujung minggu.
"Isu sebenarnya ialah untuk membersihkan daftar undi tapi Umno tak mahu buat. Najib sedang mencari kesempatan untuk memastikan kemenangan miliknya, ini termasuk mengadakan pilihanraya pada musim haji. Najib tahu bahawa penyokong PAS , ramai di antara mereka akan berada di tanah suci pada masa itu," kata Presiden PAS, Hadi Awang pada hujung minggu lalu.
UMNO tidak baik untuk Negara dan ia telah terbukti dengan rasuah yang berleluasa dan penyelewengan kekayaan negara dimana pemimpin UMNO cuba sedaya upaya untuk lindungi dari pengetahuan awam. Apabila seorang pembroker kuasa mempunyai kelebihan, dia akan memerintah mengikut citarasanya sendiri kerana baginya, Malaysia adalah miliknya dan keluarganya," kata seorang ahli akademik yang mengajar sains politik di sebuah universiti awam. Dia meminta untuk tidak dinamakan.
"UMNO juga akan menjadi tidak baik untuk Malaysia apabila tiada panglimanya yang cukup berkuasa untuk mengawal parti, yang akan mendedahkannya kepada polisi cacamarba dan campurtangan kerana puak-puak dalam UMNO akan berebut kuasa dan peluang dalam parti mereka sendiri.
Jadi, apabila pemimpin parti pembangkang, Anwar Ibrahim dan Pakatan Rakyat masih menjadi ancaman bagi mereka, Najib dan Mahathir mungkin akan dapat hidangan 'pemanis mulut' yang tidak dijangka dari ahli dalam parti dan bukan dari musuh di luar.
Senarai 'calon boleh menang' Najib untuk PRU ke-13 masih belum dimuktamadkan. Khabar-khabar angin dari BN menyatakan bagi satu kerusi akan ada sekurang-kurangnya dua calon boleh menang dan Najib - yang seperti biasanya, sentiasa berada dalam keraguan - tidak berani untuk membuat keputusan muktamad lagi kerana takut kehilangan sokongan dari pihak sendiri.
Tetapi tiada satu pun dalam senarai sanggup berkorban untuk UMNO atau BN. Suka atau tidak, Najib akan menjadi 'orang jahat' dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, siapakah yang boleh menjadi Menteri Besar Selangor jika UMNO benar-benar berjaya mendapatkan kembali trofi berharga ini?
Posted: 16 Jun 2012 04:58 AM PDT
China's much publicised loaning of two Giant pandas to Malaysia is hardly an event to be received with rousing merriment. The exercise is in equal measure preposterous and superfluous and is unworthy of festive fireworks.
How this is to be achieved is beyond baffling. But it yet again illustratesablatant manifestation of Malaysia's institutional pattern of exploiting animals to serve selfish human interests. To assume otherwise is grossly foolish.
Minister in Prime Minister's Department Koh Tsu Koon has reportedly said that China's gesture in lendingapair of pandas shows that it recognises Malaysia asaspecial country. Yes, Malaysia's specialities include licensing countless zoos to abuse animals for human fortunes.
Zoos such as Taiping zoo, Danga Bay and A'Famosa, are fairly representative examples of these atrocious zoos and are in clear conflict of conservation. Nonetheless, the Malaysian government has habitually dedicated itself to ignoring and facilitating animal abuse as animal welfare and conservation have never been on the forefront of their political consciousness.
Malaysia's decision to spend obscene amounts of money bringing inanon-native species foradecade long visit is further appalling given its complete and absolute disregard for its very own Malayan Sun bear. The Malayan sun bears are routinely orphaned and victimised by habitat loss from excessive logging, poaching for bear products and surging demand in the pet and zoo trade.
Amongst other conservation efforts, the 20 million ringgit could well be spent on saving the endangered Malayan Sun bear. Yet, the Malaysian government is not concerned in conserving them for they would serve no value to capital investments in China's economic empire.
Across the world, elephant numbers are dwindling owing to China's ruthless demand for ivory. China also remains the primary consumer of traditional Chinese medicine and wild meat, the two commodities driving the illegal wildlife trade and pushing many endangered species to near extinction.
Posted: 16 Jun 2012 03:48 AM PDT
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှန်တစ်ကယ် ဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေရဲ့ ရေးသားဖော်ပြချက်တွေဟာ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုပြီး သိခဲ့တာ။ အခုတော့ ပြည်တွင်းက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေဆီက ကြားရ သိရတာတွေကပါ ကွဲလွဲနေတာ တွေ့လိုက်ရတော့တယ်။
အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ စဖြစ်တဲ့ ကနဦးရက်တွေ (ဇွန် ၈၊ ၉၊ ၁၀) အတွင်းက Facebook ပေါ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ စက်လှေ ၃ စင်းနဲ့ ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း…ကို တွေ့မိ ဖတ်မိ မှတ်မိကြအုံးမှာပါ။ လောင်ချာနဲ့ပစ်တယ်ဆိုတာလည်း ပါသေးတယ် ထင်ပါတယ်။ အခု အဲဒီသတင်းပြောကြားချက်နဲ့ ဒီနေ့ထုတ် The Voice Weekly ဂျာနယ်မှာပါတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြေကြားထားတာနဲ့က ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ ဒီတစ်ပတ် The Voice Weekly ရဲ့ အချပ်ပိုစာမျက်နှာ III မှာ ပါပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို မဟုတ်ပါဘူးလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်က ပြောသွားပါတယ်။ သူက ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား ဖြေကြားတာပါ။ အဲဒီရက်တွေက Facebook ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်မှုပုံစံ ရေးသားဖော်ပြချက်ကတာ့ သက်ဆိုင်သူက သူရေးတင်ခဲ့သမျှ ပြန်ဖျက်လိုက်တဲ့အထဲ ပါသွားပြီထင်ပါတယ်။ (စနေ ငပေ ဆီမှာတော့ သိမ်းထားတာများ ရှိမလားပဲ) ရိုဟင်ဂျာတွေ ဝင်လာတယ် လက်နက်တွေပါတယ် လောင်ချာနဲ့တောင် ပစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အတော်များများ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြ၊ ဒေါသထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်အခါက သတင်းရဲ့ သက်ရောက်မှုနဲ့ သတင်းရဲ့ ပျံ့နှံ့မှု မြန်ဆန် ထိရောက်တယ်ဆိုတာကို သတိထားသင့်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။See More
— with အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး.
Posted: 16 Jun 2012 04:13 AM PDT
Posted: 16 Jun 2012 01:06 AM PDT
TQ Aung Soe Lynn
"သင်တို့သည်ပြောသံ ကြားကာမျှဖြင့် ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည် မယူနဲ့"
"အစဉ်အဆက် စကားမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည် မယူနဲ့"
"ဤသို့ ဖြစ်ဖူးသတတ်ဟူသော စကားမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည်မယူနဲ့"
"ပိဋကတ် မိမိတို့ရှေးဟောင်းကျမ်းဂန် စာပေနှင့် ညီညွတ်ပေသည်ဟူ၍လည်း … ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည် မယူနဲ့"
" ကြံဆတွေးတော၍ ယူခြင်းမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည် မယူနဲ့"
"နည်းမှီးယူခြင်းမျှဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည် မယူနဲ့"
"အခြင်းအရာကို ကြံစည်သောအားဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည်မယူနဲ့"
"ငါတို့ ကြံစည်နှစ်သက်၍ ယူထားသောအယူနှင့် တူညီပေသည်ဟူ၍လည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည် မယူနဲ့"
"ငါတို့လေးစားသော ရဟန်း၏ စကားဟူ၍လည်း ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည် မယူနဲ့"
Posted: 16 Jun 2012 12:37 AM PDT
TQ Helen Ayekyaw
တဂိုးရဲ့ ကဗျာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်ဆိုထားပါတယ်။
"မင်းခေါ်လို့သူတို့ မလိုက်ရင် … မင်း တကိုယ်ထဲ လျှောက်ပေတော့"။
"ကြောက်ဒူးတုန်လို့နံရံဘက်လှည့်ပြီး သူတို့ နှုတ်ဆိတ်နေရင် မင်း ကံဆိုးတာပေါ့၊
စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ တကိုယ်ထဲသာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပေတော့"။
"တောကြီးမျက်မဲထဲ ဖြတ်သန်းနေတုန်း မင်းကို သူတို့ စွန့် ခွါသွားရင် မင်း ကံဆိုးတာပေါ့၊
ဆူးငြောင့်ခလုပ်တွေ နင်းချေရင်း သွေးစွန်းတဲ့လမ်းမှာ မင်းတကိုယ်ထဲ လျှောက်ပေတော့"။
"မုန်တိုင်းထန်တဲ့ညမှာ မီးအိမ်ကို သူတို့ မကိုင်ရင် မင်းကံဆိုးတာပေါ့၊
ဝေဒနာမီးလျှံနဲ့မင့်နှလုံးသားကို ထွန်းညှိ တကိုယ်တည်း တောက်လောင်ပါစေတော့"။
တဂိုးရဲ့ ကဗျာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
Posted: 16 Jun 2012 01:17 AM PDT
Shah Alam - Spekulasi tarikh Pilihan Raya Umum ke -13 (PRU13) berterusan! Sementara bulan Ramadan akan bermula dalam lima minggu manakala Bajet 2013 pula akan dibentangkan akhir September ini, spekulasi sebelum ini bahawa PRU kemungkinan besar dipanggil awal bulan depan dilihat 'terpaksa' dilupakan banyak pihak.
"Nampak gaya begitulah (tidak mungkin pilihan raya sebelum Ramadan)," kata beliau ketika ditanya sama ada SPR mempunyai masa yang selesa untuk memanggil pilihan raya jika Parlimen dan Dewan Undangan Negeri (Dun) tidak dibubarkan awal minggu depan.
"Kita tidak tahu bila Parlimen akan dibubarkan, tetapi apabila Parlimen dibubarkan, kami memerlukan masa untuk menyelesaikan siri proses ke arah pengundian," katanya.
"Apa pun, sama ada hendak bubar Parlimen atau tidak, itu adalah hak Perdana Menteri. Jika dibubarkan, kami akan mengadakan pilihan raya dalam tempoh 60 hari bermula daripada tarikh kekosongan (Parlimen)," kata Wan Ahmad lagi.
"Setakat ini pun saya tidak nampak apa-apa 'keghairahan akan ada PRU dalam beberapa minggu ini. Nampak gaya, kita kena menunggu sehingga selepas Aidilfitri," katanya lagi.
Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pembubaran Parlimen "adalah keputusan politik" yang hanya akan diputuskan oleh Perdana Menteri dengan mengambil kira pelbagai faktor yang beliau rasakan sesuai.
"Sebagaimana saya telah katakan sebelum ini, ia keputusan politik. Parlimen boleh dibubarkan bila-bila masa, sekarang, bulan depan ataupun sebagainya. Tiada halangan kepada Perdana Menteri dalam undang-undang," katanya lagi.
"Pastinya beliau akan mengambil kira sama ada kesemua agenda dan program sudah dilaksanakan ataupun belum. Jika beliau merasakan sesuai, beliau boleh membubarkan," kata Ahli Parlimen ini.
Sehubungan itu katanya, mengambil kira perkembangan dalam masa lima minggu akan datang, "satu-satunya halangan yang ada hanyalah bulan Ramadan."
"Masyarakat Islam, orang Melayu tidak mahu pilihan raya diadakan pada bulan Ramadan. Sambutan Gawai dan Pesta Kaamatan baru selesai, sekarang bulan Ramadan," katanya. -SH
Posted: 16 Jun 2012 12:26 AM PDT
Cho Tu Zal shared Lumin Thaungtun's photo.
သတင်းအပြည့်အစုံမှာ …. ရန်ကုန် ၂း၃၀ ယနေ့ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၂း၁၅ အချိန်တွင် ကုက္ကိုင်းလမ်းဆုံ အနီး ပုလဲကွန်ဒိုမျက်စောင်းထိုး ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ပလီ အရှေ့တွင် ကားတစ်စီး ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရေးတွင် အထူးလေ့ကျင့်ထား သည်ဟုယူဆရသော … အရွယ်တူသန်မာ ဖြတ်လတ်သော သူ လူ ၅၀ ခန့်အား ချပြီး အချိန်ကိုက်ပြန်လာခေါ်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမားများသည် ပလီ၏ ဆိုင်းဘုတ်နှင့် မျက်နှာစာ အုတ်နံရံအချို့အားဖျက်စီးခဲ့ကြောင်း ပလီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းသော ဆိုင်တစ်ဆိုင် အပါအ၀င် ဆိုင် ၃ ဆိုင်အားဝင်ရောက်ဖျက်စီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ "အဲဒီလာဖျက်စီးတဲ့သူတွေက သာမာန် အရပ်သားတွေနဲ့ မတူဘူး အတော်လေးကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ် အမိန့်တစ်ခုအောက်မှာ ၀ုန်းကနဲ့ရောက်လာပြီး ဖျက်ကြတယ်ပြီးတော့ ချက်ခြင်း အချိန်ကိုက်လာခေါ်တဲ့ကားပေါ်ကို တက်ပြေးသွားကြတယ်ဟု အရပ်အမောင်းတွေက ကောင်းတယ် တညီတည်းပဲ တော်တော်စနစ်တကျ လာဖျက်သွားတာ" ဟု ပလီပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူ မျက်မြင်သက်သေများမှ myanmarmuslim.net အားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted: 15 Jun 2012 10:43 PM PDT
Source: FB of U Aung Tin "What is History"
ဦးလှကြိုင်နှင့် မိတ်ဆွေများခင်ဗျား ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသား ဖြစ် မဖြစ် ကျနော့သဘောက ရခိုင်အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ သဘောထားနှင့် ထပ်တူဖြစ်ကြောင်း အရင်ပြောလိုပါတယ်။ … ဦးလှကြိုင်အခု ဝေမျှလိုက်တဲ့ သမိုင်းပညာရှင်ဆိုသူရေးတဲ့ စာတမ်းသည် ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ဖုံးကွယ်ပြီး သိက္ခာမဲ့စွာ ရေးသားထားတဲ့ အလိမ်အညာတွေ အများကြီးပါနေတယ်ဆိုတာကို ပထမစာတစ်မျက်နှာလောက်ကဘဲ ထောက်ပြပါရစေ။
အင်းဝဘုရင်ကြောင့် လေးမြို့မင်းဆက်ပြုတ်ပြီး မင်းစောမွန်က ဘင်္ဂလားဘုရင်ဆီမှာ ၂၁နှစ်ခိုလှုံခဲ့ပါတယ်။
၂၁နှစ်လုံးလုံး မင်းစောမွန်ကို ဘင်္ဂလားမွတ်စလင်ဘုရင်က စောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။
၂၁နှစ်ကြာပြီးနောက် ဘင်္ဂလားဘုရင်က မွတ်စလင် ဘင်္ဂါလီ စစ်သည်ငါးသောင်းနှင့် မင်းစောမွန်ကို နန်းပြန်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ကြိမ်တိုင် ပြန်တင်ပေးရတာတဲ့ အသေးစိတ်တွေကို မသွားလိုတော့ပါဘူး။
သို့သော် ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန်ရဲ့ နောက်ဆုံးမင်းဆက် မြောက်ဦးမင်းဆက်ကို ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေရဲ့ သွေးနှင့် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှန်ကို သမိုင်းအလမ်ပယ်ဆရာတွေက ဘယ်လိုဘဲဖုံးကွယ်စေကာမူ ဖျောက်ဖျက်လို့မရပါဘူး။
အဲဒီကစပြီး နောက်အနှစ်နှစ်ရာလောက် ရခိုင်မင်းဆက်တွေမှာ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်တွေက မိမိမကြိုက်တဲ့ဘုရင်ကို ဖြုတ်ပြီး ကြိုက်တဲ့ ဘုရင်ကိုတင်မြှောက်နိုင်လောက်အောင် king makers တွေဖြစ်ခဲ့တာက သမိုင်းမှာ အထင်အရှားပါ။
ရခိုင်ဘုရင့်နန်းတော်ရဲ့ နန်းတော်သုံးစာနှင့် စကားသည် ဘင်္ဂါလီဘာသာဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် ဘင်္ဂါလီ နန်းရင်းဝန်၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ မှူးမတ်တွေ၊ စာဆိုတွေ၊ စစ်သည်တွေနှင့် လွှမ်းခဲ့တယ်။
ရခိုင့်စာပေသမိုင်းမှာ တံခွန်ဦးစွန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ရခိုင်မင်းသမီးအေးချင်းကို စပ်ဆိုခဲ့သူဟာ အဗ္ဗဒူမင်းညို(အဒူမင်းညို)ဆိုတဲ့ မွတ်စလင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို မြောက်လွှဲကျော်လို ကျော်လွှားပြီး ရေးနိုင်တယ်ဆိုတာ တော်ရုံအရှက်ကင်းမဲ့သူများ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
မျိုးချစ်စိတ်နှင့် ရေးရင် မျိုးချစ်သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်း မဖြစ်ပါဘူး။
မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်နှင့် ရေးရင် မျက်ကန်းမျိုးချစ်သမိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းတော့ ဖြစ်မလာပါဘူး။
စိတ်ကူးယဉ်ပြီး နဂါးမက မွေးတာတို့၊ နေနတ်သားက ဆင်းသက်တာတို့၊ နှစ်ငါးထောင် နှစ်တစ်သောင်းစသဖြင့် ဆွဲဆန့်လို့ ကောင်းတိုင်း ဆွဲဆန့်ရင် ဒန္တာရီဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်း မဖြစ်ပါ။
သမိုင်းဖြစ်စေချင်ရင် သာရင် သာတဲ့အတိုင်း၊ နာရင် နာတဲ့အတိုင်း၊ မှန်ရင် မှန်တဲ့အတိုင်း၊ မှားရင် မှားတဲ့အတိုင်း နောင်လာနောက်သားတွေ သင်္ခန်းစာမှန်မှန် ထုတ်ယူနိုင်အောင် အချက်အလက်မှန်တွေကို ရေးရဲတဲ့ သတ္တိရှိမှ သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲဘောကြောင်သူတွေဟာ သမိုင်းဆရာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
မအ အောင်လို့ သမိုင်းသင်ကြလို့ ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောခဲ့တာက သမိုင်းမှန်ကို ဆိုလိုတာပါ။
နားထောင်ချင်ဖွယ် ဒန္တာရီတွေနှင့် ရောသမမွှေတဲ့ သမိုင်းဆရာတုများဟာ နောင်လာနောက်သားတွေကို လူညံ့ လူရှော် လူအတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ သမိုင်းတရားခံ လက်သစ်တွေ ဖြစ်လာအုံးမှာပါ။
အတိတ်ကို ဘယ်သူမှ ပြန်ပြင်လို့ မရပါဘူး။
ကျနော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေ အတိတ်က ဖြစ်ရပ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် သင်္ခန်းစာယူနိုင်အောင်က သမိုင်းမှန်ကို သင်ကြားပေးနိုင်မှ ကျနော်တို့ ဘိုးဘေးတွေ မှားခဲ့တဲ့ အမှားမျိုးကို သူတို့ ရှောင်ကွင်းနိုင်ကြမယ်။
ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ ကျနော်တို့ ဘိုးဘေးတွေ မှားခဲ့သလို ထပ်မှားကြအုံးမှာပါ။ အောင်တင် ဇွန်လ (၁၅) ၂၀၁၂
Rohingyas in Malaysia protest violence AFP MKini
Thousands of ethnic Rohingya Muslims protested in Kuala Lumpur today, calling for an end to the violence against their community in Burma.
More than 3,000 people, including refugees, walked fromamosque to the nearby Burmese embassy after prayers, holding banners that read 'Stop genocide' and 'Stop religious violence' and shouting 'Allahu Akhbar' or 'God is greatest'.
"We ask for… urgent international intervention to stop the killing and violence toward Rohingyas," the Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organisation Malaysia said inastatement.
"Though the military junta has stated that the situation is better now but the information we received from back home (is) different… The situation (has) become worse and the violence has increased," it said.
The group called on the United Nations to send observers to monitor the situation and aid, such as medicine and food, and for world leaders to pressure the government to stop persecuting them.
Most of the protesters were men, wearing Muslim prayer caps, and many had come from northern Malaysia to join the demonstration.
Clashes in western Rakhine state between Buddhist Rakhine and Muslim Rohingya, who are not recognised by the Burmese government as citizens, have left dozens dead and more than 30,000 displaced.
Malaysia is home to hundreds of thousands of people from Burma, including more than 20,000 Rohingya refugees.
An estimated 800,000 Rohingya live in Burma, described by the UN as one of the world's most persecuted minorities.
Burma's government considers the Rohingya to be foreigners, while many citizens – including the local Rakhine Buddhist population – see them as illegal immigrants from neighbouring Bangladesh and view them with hostility.
Posted: 16 Jun 2012 12:47 AM PDT